Lahatsoratra nataon'i Shawn Schwegman momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Shawn Schwegman
Masiaka ny fifaninanana antsinjarany amin'izao andro izao. Miaraka amin'ireo mpilalao lehibe toa an'i Amazon manjaka amin'ny e-varotra, orinasa maro no miady mafy amin'ny fanamafisana ny toerany eo amin'ny tsena. Ireo mpivarotra loha ao amin'ireo orinasan-tserasera e-commerce ambony indrindra eto an-tany dia tsy mipetraka eny an-tsisiny fotsiny fa manantena ny hitrangan'ny vokatra. Mampiasa tetika sy tetikady miaramila Art of War izy ireo hanosehana ny vokariny alohan'ny fahavalo. Andao hodinihintsika ny fomba fampiasana ity paikady ity hisamborana tsena… Raha toa ka mazàna ny marika manjaka